The Myawady Daily: တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ပုံနှင့်တာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား တာဝန်ရှိသူများက မော်စကိုမြို့ရှိ Demodedovo လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်စဉ်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး Army General Sergey K. Shoigu ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရုရှားနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇွန် ၂၃ ရက် ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၉ နာရီတွင် Sevastopol တပ်မတော်လေဆိပ်မှ ရုရှားတပ်မတော် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာရာ Black Sea Fleet ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ Vice Admiral Kulekov Valaydii နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် မော်စကိုမြို့ရှိ တပ်မတော်လေဆိပ် Chkalovskii သို့ရောက်ရှိကြပြီး ရုရှားတပ်မတော်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် TL-76 TD အမျိုးအစား ကုန်တင်လေယာဉ်အား ကြည့်ရှုလေ့လာကြရာတာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
ထို့နောက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီတွင် မော်စကိုမြို့ရှိ Demodedovo လေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြရာ ရုရှားတပ်မတော် ကြည်းတပ်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် Maj. General. Vladimir Marusin နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီး ဦးတင်ဇော်၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ညွန့်ဆွေနှင့် သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ် တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီး များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nikolay A.Listopadov ၊ ဒုတိယစစ်သံမှူး Commander Vitaly V. LUCHSHEV နှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားကြသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီး များ ပြန်လည်လိုက်ပါခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by myawady at 12:30 AM